प्रतिभा प्रतिष्ठानको दशौँ वार्षिकोत्सव | We Nepali
प्रतिभा प्रतिष्ठानको दशौँ वार्षिकोत्सव
वीनेपाली | २०७४ भदौ १४ गते २२:१५
बेलायत । नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतले स्थापनाको दशौँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । हाईवेकमस्थित रोयल एयरफोर्स क्याम्पमा आयोजना गरिएको समारोहलाई प्रमुख अतिथि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीद्वारा उद्घाटन गरिएको थियो । उक्त समारोहमा युनिभर्सिटी अफ लण्डनका प्रा.डा.माइकल हट र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञासभा सदस्य प्राज्ञ शशी लुमुम्बूलाई विशेष अतिथिमा आमन्त्रण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा राजदूत सुवेदीले बेलायतमा नेपालीहरूको भाषा र साहित्यप्रतिको चासो र प्रतिष्ठानले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए । उनले अभिव्यक्ति सृंखलाका स्रष्टा डा.रूपक श्रेष्ठलाई बधाई दिए । यस्तै युवा कवि तथा चित्रकार पियुस गुरूङको कविता लेखन र चित्रकारिताको प्रसंशा गरेका थिए । पियुसजस्ता युवाहरूको सृजनाले नेपाली समाजको पुस्तान्तर कम गर्न ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास उनले ब्यक्त गरे । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विशेष अतिथि प्राज्ञ शशी लुमुम्बूले प्रतिष्ठानले नेपाली साहित्य र संगीतमा गरेको योगदानको महत्व रहेको बताए । नेपालमा वर्षेनी पुरस्कार र सम्मान वितरण कार्यक्रमले सष्ट्राहरूको उच्च मूल्याङ्कन गरेको उनको भनाइ थियो ।
समारोह भब्य र ब्यवस्थित गर्नको लागि कार्यक्रम तीन चरणमा विभाजन गरिएको थियो । पहिलो चरणमा संस्थाद्वारा प्रकाशित ‘एक दशक’ स्मारिका विमोचन र युवा चित्रकार पियुस गुरूङको एकल चित्रकला प्रदर्शनीको अनावरण गरिएको थियो । विशेष अतिथि प्राज्ञ शशी लुमुम्बूलाई मानार्थ सदस्यको सम्मानपत्रद्वारा सम्मानित गरियो । साथै युवा चित्रकार पियुस गुरूङलाई पनि सम्मानित गरिएको थियो ।
दोश्रो खण्डमा अभिव्यक्ति सृंखला भाग दशका लागि कवि डा. रूपक श्रेष्ठको प्रस्तुति थियो । कवि श्रेष्ठले तीन दर्जन मुक्तक, कविता र गजलहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनको मुक्तक र कविताहरूबारे प्रा.डा.माइकल हटले टिप्पणी गरेका थिए । प्रस्तुत सृजनाहरू विम्व, प्रतीक र विषयहरूको विविधता रहेको उनको भनाइ थियो । कवि श्रेष्ठका रचनाहरू परिवर्तनकारी भएको र केही यथार्थवादी पनि रहेको उनको तर्क थियो । डा. हटले आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा कवि श्रेष्ठका केही रचनाहरू वाचन गरेका थिए ।
एकल वाचनको बिचबिचमा सञ्चालिका अन्जु अन्जलीसंग सृजनात्मक सम्वाद गरेका थिए । कवि श्रेष्ठको रचना रहेको गीत श्रेया श्रेष्ठले गाएकी थिइन् ।
कार्यक्रमको तेश्रो खण्डमा कविहरूले आ–आफ्नो रचना वाचन गरे । अध्यक्ष दयाकृष्ण राईले प्रतिष्ठान स्थापनाको दश वर्षको अवधिमा संस्थाले गरेका कार्यहरू प्रष्ट्याएका थिए । बेलायतमा नेपाली भाषा पठनपाठनको लागि गरिएको पहल, प्रत्येक वर्ष एकजना स्रष्ट्रालाई अभिव्यक्ति सृंखलामा मञ्च प्रदान गरिदै आएको र कलाकारहरूको एकल सांगीतिक प्रस्तुतिहरू आयोजना गरिदै आएको राईले स्मरण गराए । प्रतिष्ठान आफ्नै पनि स्रष्ट्राहरूको थलो भएकाले बिभिन्न समयमा स्रष्ट्राहरूको सृजनाको उच्च मूल्याङ्कन गरी कृति प्रकाशन गर्दै आइरहेको पनि उनले बताए । नेपालमा पुरस्कार र सम्मान वितरण र छनौट प्रकृया सम्बन्धमा पनि अध्यक्ष राईले संस्थाको धारणा स्पष्ट पारेका थिए । कार्यक्रममा उपाध्यक्ष गणेश राईले स्वागत मन्तब्य दिए ।
कार्यक्रमको पहिलो खण्ड महासचिव मिजास तेम्बेले सञ्चालन गरेका थिए । समय अभावले अन्तिम खण्डको कार्यक्रम हतारमा समापन गरिएको थियो ।